Gudoomiyihii Maxkamadda Gobolka Banaadir oo shaqadii laga joojiyay – STAR FM SOMALIA
Star FM: Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa maanta shaqo joojin ku sameeyay Guddoomiyihii Maxkamadda Gobolka Banaadir.
Warqad ka soo baxday xafiiska Guddoomiyaha Maxkamadda sare ayaa waxaa shaqada looga joojiyay muddo aan la cayimin Guddoomiyihii Maxkamadda Gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur.
Qoraalka ayaa ku xusnaa in sababaha shaqo joojinta ay la xiriirto dacwado badan oo taal maxkamadda iyo in aan Guddoomiyuhu si buuxda gacanta ugu heyn howlaha maxkamadda gobolka.
Xaashi Cilmi Nuur ayaa xilka Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir loo magacaabay bishii lixaad ee sanadkii 2012, xilligii dowladdii KMG ee uu Madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed.
Hey’adaha Garsoorka ee dalka ayaa lagu eedeeyaa inuu musuq maasuq iyo wax is daba marin ka jiro, waxaana dhowaan Madaxda dowladda ay balan qaadeen in wax ka bedel lagu sameynayo.
Akhriso warqada ka soo baxday Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee shaqada looga joojiyay Guddoomiyihii Maxkamadda Gobolka Banaadir
Tarsan oo sheegay in loo diiday u tartamidda aqalka hoose ee barlamaanka